Libanona : 26 Taona Aty Aorian’ny Fiafaran’ny Ady An-Trano, Mbola Mitaky Ny Marina Ny Fianakavian’Ireo Olona Tsy Hita Popoka · Global Voices teny Malagasy
Libanona : 26 Taona Aty Aorian'ny Fiafaran'ny Ady An-Trano, Mbola Mitaky Ny Marina Ny Fianakavian'Ireo Olona Tsy Hita Popoka
Voadika ny 02 Septambra 2016 9:25 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, عربي, English
Dikasarin'ny lahatsary fanentanan'ny CIRC ho an'ireo Libaney tsy hita popoka. Loharano: Pejy Facebook-n'ny CIRC.
Isantaona ny 30 Aogositra dia Andro Iraisam-pirenena Ho An'ireo Olona Tsy Hita Popoka ary natao mba hahafantarana ny isan'ireo olona mbola tsy hita popoka tamin'ny ady, loza voajanahary ary fifindràmonina — sady fanehoana firaisankina amin'ireo havany akaiky”. Tamin'ny 1981 tany Amerika Latina no niandohany niaraka tamin'ny ‘Federasion'ny Fikambanan'ny havan'ireo gadra-tsy hita popoka’ tany Costa Rica, nanomboka nahazo vahana maneran-tany ilay fahatsiarovana.
Olona an'arivony maro no mbola tsy hita popoka any Libanona, 26 taona aty aorian'ny fifaranan'ny ady an-trano. Lazaina matetika fa tena “saropady” eo amin'ny resaka politika ny olan'ireo tsy hita popoka ao amin'ny firenena noho ny antony tsotra, satria mpikambana mpanao politika sangany any Libanona ny ankamaroan'ireo mpitarika ady. Tamin'ny Janoary 2016, ohatra, dia niaraka tamin'i Abir Ghattas aho nanoratra ny ‘Nampisalasala ny maro ilay ‘Fanambadiana Kristiana’ Libaney teo amin'i Aoun sy Geagea’, lahatsoratra ho an'ny Global Voices. Fantatra fa anankiroa amin'ireo malaza indrindra mpitarika ady nandritra ny ady an-trano 1975-1990, izay mbola manan-kery na fara-faharatsiny mbola manaloka amin'izao fotoana izao, i Michel Aoun sy i Samir Geagea. Ary azo antoka fa tsy izy ireo ihany.
Natahotra ny hanao fanadihadiana momba ireo olona tsy hita popoka ny manampahefana Libaney, fa naleony namorona lalàna mba hanafohezana ny fotoana takiana mba hanambaràna fa maty ireo olona tsy hita popoka, dimy taona aty aorian'ny fifaranan'ny ady. Tamin'ny 2009, namerina ny antsony ho an'ny governemanta Libaney sy ireo fikambanana iraisam-pirenena maro ny Amnesty International mba hanadihady ireo fasana iombonana manerana ny firenena.
Notantarain'ilay vehivavy Libaney iray, Sawsan Hirbawi, izay nalaina an-keriny tamin'ny 1976 ny anadahiny , tamin'ny Amnesty International fa tsy mbola nanome valinteny azy mihitsy ny governemanta Libaney.
Efa nangataka ny fanjakana Libaney nandritra ny taona maro izahay mba hihady ireo fasana faobe ary hanambara ny nanjo ny anadahiko sy ireo maro hafa, nefa tsy mbola nanao na inona na inona ny fanjakana misy anay.
Na dia matetika mifantoka any amin'ny isan'ireo tsy hita popoka tsy mitsaha-mitombo any Syria aza ny fijerin'ny haino aman-jery tato ho ato, ary ekena izany, ireo mpanentana any Libanona kosa dia nanantena ny hanasongadinana ny momba ireo Libaney izay tsy hita popoka nandritra ny ady tamin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ireo tsy hita popoka.
Noho izany, dia namoaka lahatsary mampihetsi-po mampiseho vavy antitra iray miandry amim-pahanginana ao an-tranony ny zanany lahy ny Komitin'ny vokovoko Mena Iraisam-pirenena (CIRC) any Libanona. Mifarana amin'ny hafatra tsotra ilay lahatsary : “Nifarana ny adinareo. Ny azy tsy mbola vita.”
Nijanona tany Libanona ny CIRC, hatramin'ny 1967, taonan'ny Ady Enina Andron'ny Arabo sy ny Israeliana, ho valin'ny fitomboan'ny filàn'ireo Palestiniana mpitsoa-ponenana mandositra ny tafika Israeliana, sy ny filàn'ireo vondrom-piarahamonina mpampiantrano. Miasa manerana ny firenena ny CIRC ary manana birao any Beyrouth, Tripoli, Zahle, Tyro ary any amin'ny toby Palestiniana Ein El Helwe .
Ny tarehimarika ôfisialy dia milaza fa 17.000 no olona mbola tsy hita popoka any Libanona, na dia latsak'izany aza ny isa amin'izao fotoana izao. Tamin'ny resaka nifanaovany tamin'ny Global Voices i Tarek Wheibi, mpitondra tenin'ny CIRC any Libanona izay manohana ihany koa ny delagasiom-paritra, dia manamafy fa :
Tsikaritry ny CIRC fa nisy fiverimberenana maro sy tsy fahamarinana tao. Misy ireo olona voatatitra tamin'ireo manampahefana samy hafa hoe tsy hita popoka ary voaisa im-betsaka, ny sasany tsy voaisa mihitsy. Tsy mazava ny isa amin'izao fotoana izao, fianakaviana maherin'ny 2.500 no notsidihanay, ka ny fianakaviana sasany dia maherin'ny olona iray no tsy hita.
Manao fahatsiarovana isantaona ireo tsy hita popoka ny CIRC, ary efa ho folo taona izao. Ny hevitra, araka ny tenin'i Wheibi dia ” fiombonana amin-dry zareo sady mampatsiahy ny adidiny amin'ny governemanta Libaney”, tsy miankina amin'ny “fironana politika”. Raha ny marina, araka ny nampatsiahivin'i Wheibi antsika, dia mitondra ny vahoaka amin'ny hadisoana ireo izay mampitandrina ny famborahana ny marina noho ny tahotra korontana ara-politika :
Maro no mihevitra fa ” saropady loatra” ity resaka ity any Libanona, ny sasany aza dia mampitandrina fa mety hiteraka korontana hafa izany. Tena mifanohitra amin'izany no asehon'ny traikefa azonay tamin'ny fandraisana an-tànana ny antontan-taratsy momba ireo tsy hita tany amin'ny toerana toa an'i Kosovo, Bosnia, Iràna, Iràka ary ireo toerana hafa. Ny fikarakaràna ny taratasin'ireo tsy hita dia manampy amin'ny fanalefahana ny disadisa sady manampy amin'ny fanasitranana ny firenena. Tsara ny mirakitra an-tsaina fa tsy fanadihadiana izy ity na fanendrikendrehana. Ilaintsika ny miatrika io olana io mba hahafahan'ireo fianakaviana misaona ny malalany sy hahafahany mihetsika. Ilaintsika ny miatrika azy ity satria feno taolambalon'olona izay tsy maintsy halevina araka ny tokony ho izy ny tanin'i Libanona.
Raim-pianakaviana mitazona ny sarin'ny zanany vavy tsy hita popoka tamin'ny fotoana nokarakarain'ny CIRC tao amin'ny Oniversiten'i Saint-Joseph (USJ). 30 Aogositra 2016. Sary avy amin'ny CIRC/Hussein Baydoun. Loharano : Pejy Facebook-n'ny CIRC Libanona.
Efa fantatry ny CIRC tamin'ny 2011 ny zavatra takian'ny fianakavian'ireo olona tsy hita popoka ireo fa :
Ny fangatahana voalohany ataon‘ireo fianakaviana dia ny zo hahafantatra ny nanjo ireo havany tsy hita popoka. Asehon'ny tombatombana fa maro no mila fanohanana ara-tsaina sy ara-tsosialy. Ny sasany mila fanohanana ara-bola, misy ireo vehivavy namoy ny vadiny sy ny zanany lahy tao anatin'ny indray andro ary an-taonany maro no tsy nanana na iza na iza hikarakara azy.
Wadad Halwani tamin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ireo tsy hita popoka tao amin'ny Oniversiten'i Saint-Josephat (USJ). 30 Aogositra 2016. Loharano: Pejy Facebook-n'ny CIRC.
Tsy ny fianakavian'ireo tsy hita popoka ihany no manery ny governemanta hihetsika. Ilay Libaney mpikatroka mafana fo malaza, Wadad Halwani, izay filoha am-perin'asan'ny Fikambanan'ny fianakavian'ireo tsy hita popoka sy nalaina an-keriny, sady nalaina an-keriny ny vadiny tamin'ny 1982 satria mpikambana amin'ny Fikambanan'ny Hetsika Kaominista, no nangataka ny mpanao gazety iray, vao tsy ela akory izay, mba hanontany ireo mpaka an-keriny fa tsy ny fianakavian'ireo niharan'ny fakàna an-kery.
اذهب واسأل الخاطفين ماذا فعلوا بضحاياهم. لماذا تسألني أنا؟ ألست صحافياً؟ اذهب واسألهم ماذا فعلوا بهم. وعندما تنتهي من ذلك، يمكن أن أجيبك على ما تريد
Mandehana ary anontanio ireo mpaka an-keriny ny amin'izay nanaovany ireo olona azony. Nahoana no manontany ahy ianareo ? Tsy mpanao gazety ve ianareo ? ‘Ndehana ary anontanio azy ireo izay nataony. Rehefa vitanareo izany, dia afaka mamaly anareo amin'izay tianareo aho.
Tamin'ny fotoam-pahatsiarovana nokarakarain'ny CIRC tamin'ity taona ity, dia nohirain'ilay vehivavy Libaney mpihira malaza, Omaima El Khalil, ny ‘Asfour‘ (vorona), izay mitantara fa amin'izao fotoana izao dia mariky ny fanohanana ny fianakavian'ireo tsy hita popoka sy ny fitadiavana ny marina ny vorona. Izao no fiandohan'ny tononkira :
عصفور طلّ من الشباك، قال لي يا نونو
خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو -
Nisy vorona nipetraka teo am-baravarankeliko. Dia hoy aho ” Oh, ry vorona kely.
Afeno miaraka aminareo aho, mitalaho aminareo aho.”